MW Ismaaciil Cumar Geelle oo Muqdisho imanayo maalinta Sabtida ah - Muqdisho Online
Home Wararka MW Ismaaciil Cumar Geelle oo Muqdisho imanayo maalinta Sabtida ah
MW Ismaaciil Cumar Geelle oo Muqdisho imanayo maalinta Sabtida ah
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa in maalinta Sabtida ah ee Maarso 16, 2019 ay soo gaaraan magaalada Muqdisho sida ay MOL u xaqiijiyay ilo wareedyo ka tirsan xafiiska Madaxweynaha.
MW Ismaaciil Cumar Geelle ayaa u imanaya furitaanka safaaradda Jabuuti ee magaalada Muqdisho taasoo la dhameeyay dhismaheeda mar dhow. Safaaradda ayaa ku taal dhulkii Miranaayada ee uu amarka ka soo saaray Gud Gobolka Banaadir kuna amray masuuliyiinta dowladda ee halkaa degan in aay si dhaqso ah uga guuraan.
Sida aay xog ku heshay MOL, waxaa ujeedka Gud. Yariisow uu ahaa ka jawaabid cabasho aay dirtay dowladda Jabuuti taasoo aay rabaan in dhulka safaaradaa loo ballaariyo si aay u sugaan amniga safaaradda.
Madaxweynaha Jabtuuti ayaa la filayaa in uu kulamo la qaato Madaxda dowladda Soomaaliya waxa uuna kala hadli doonaa xaaladda Soomaaliya, howlgalka AMISOM iyo isbadalada ka socda geeska Africa, sida ay MOL u sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo diiday qorshe lagu sii-deeyn lahaa Muqtaar Rooboow (VIDEO)
Next articleOromo Protests Still Rocking Ethiopia